I-Sare21 - I-Airbnb
Indawo yokulala eCiumbuluit, embindini weBandung. Kufuphi neCihampelas, iHegarmanah, iDago, iSiliwangi kunye neSetiabudi. Isithuba senzelwe ukusetyenziswa okungekho kwezoshishino kunye neyunithi engeyiyo etshayayo efanelekileyo. Abantu abadala be-2. Akukho zilwanyana zasekhaya zivumelekileyo.
I-Wifi ne-TV ziyafumaneka kwaye zisimahla. Ijimu ayiloncedo okwangoku.
QAPHELA: abaphathi besakhiwo banokucela undwendwe ukuba lubonise iziphumo zovavanyo ezingalunganga zeSwab Antigen ngaphambi kokufika (uvavanyo luthathwe kwiintsuku ezi-3 ngaphambi komhla wokutyelela). Pls lungiselela ngokufanelekileyo
Iflethi inemigangatho emibini.
Umgangatho wokuqala wendawo yenkonzo kuquka ikhitshi, i-lavatory kunye negumbi lokuhlala
Umgangatho wesibini (i-mezzanine) yindawo yokulala
4.93 · Izimvo eziyi-149
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi149
Indawo eninzi yokuphola, iivenkile zokutyela kunye nomtsalane kubakhenkethi ikwindawo yaseCiumbuluit. Le ndawo ikwayimizuzu eyi-5 xa uhamba ngemoto usiya kwiYunivesithi yaseParahyangan nemizuzu eyi-10 xa uhamba ngemoto usiya eBandung Institute of Technology (ITB). Kufumaneka izinto zokupheka nezokutya ezilula, kunye nezinto ezinokusetyenziswa kwigumbi lokuhlambela (itawuli, isepha, ishampu, ibrashi yamazinyo kunye nomthi wokuhlamba amazinyo). I-Wifi iyafumaneka nangona sicebisa ukuba uphumle nje uze unikezele ngeefowuni eziqaqambileyo;)
Nceda uqhagamshelane nam ukuba ufuna uncedo. Nangona ndingekho kwi-intanethi imini nobusuku (ndingumntu nje emva kwako konke :), ndiza kuzama ukuphendula ngokukhawuleza
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kecamatan Cidadap